Webhusaiti Dhairekitori, Dhairekitori reBhizinesi, Yemahara Webhusaiti Dhairekitori Chinyorwa
Hutano & Varaidzo
Iri ibhuku rezvinyorwa zvebhizinesi, kwaunogona kuendesa webhusaiti yako kuti inyorwe pasi pechikamu kana chikamu chidiki. Ichi cheMahara Webhusaiti Chinyorwa dhairekitori iyo inokutendera iwe kuendesa webhusaiti yako neMifananidzo, Rangi, Ruzivo, RSS Mari, nezvimwewo.
Chinyorwa ichi chinosanganisira ese marudzi ebhizinesi ayo vanhu vangave vachitsvaga uye imwe yeakareruka uye anoshanda nzira dzekuwana mukana vatengi kubhizinesi rako.
Zvikamu & Sub Zvikamu
Ini J K
O P Mubvunzo
TV - Radiyo
Fashoni - Zvipo
Sravana Sameeralu Serial 4th Hotels
Hapana - Profit
Bhizinesi Webhusaiti Dhairekitori
Iyo Bhizinesi Webhusaiti dhairekitori inoreva zvakananga kune bhizinesi rine chekuita nekupa masevhisi uye kutengesa zvigadzirwa. Izvi zvinosanganisira kugadzira kombiyuta mabasa, Website pamasikiro mabasa, SEO mabasa, motokari mabasa, mutauro Coding unyanzvi, SEM basa rubatsiro, etc.
The dzokushandura kunosanganisira inonyanya kufarirwa bhizimisi kuti unogona kutsvaga nokuti kufambira navo kwakavakirwa munzvimbo dzenyu kuwana zvakanaka kwenyanzvi .
Ichi chikamu chakakosha chekushambadzira nekusimudzira webhusaiti yako. Kuve imwe yeinjini huru dzekutsvaga, Google inoonekwa seyakanakisa injini yekutsvaga kuti ipe mhedzisiro inokodzera yevashanyi. Kunze kwekutevera akaomarara algorithm yekumisikidza chinzvimbo chewebsite, Google inopawo varidzi vewebhusaiti kuti vaite maGoogle ad kushambadzira. Iyi inzira yekushambadzira pamhepo uye inonzi inonzi kushambadzira kwakabhadharwa.
Nebhuku redu rebhizimusi, iwe unokwanisa kuwana vanachipangamazano vanogona kukubatsira iwe neGoogle kushambadzira kushambadza, kutora mazwi akakodzera uye kusimudzira webhusaiti yako nenzira inoshanda kwazvo.
BING ndiyo imwe yeinjini huru dzekutsvaga, iyo inofambiswa neMicrosoft. Iyo ndeimwe yeakanyanya kutsvaga injini uye mawebhusaiti anogara achiedza kuyedza pamusoro pamusoro pane iyi yekutsvaga injini zvakare.
Zvino, sekuziva kwedu kwese injini dzekutsvaga dzinoteedzera imwe seti yemitemo kana algorithm yekuisa chinzvimbo kuiswa kune chero webhusaiti, zvakakosha kuti webhusaiti yako izadzise ese iwo. Tine nyanzvi kana mabhizinesi akanyorwa mudhairekitori redu anogona kukubatsira kukwidzirisa webhusaiti yako uye nekuita kuti ive inoenderana neinjini dzekutsvaga uye uwane yako yepamusoro.
Wikipedia ndeye yemahara online encyclopaedia iyo inokupa iwe ruzivo nezve chero chinhu. Wikipedia inogadzira peji rakazvimiririra kune zvese zvese zvaunogona kutsvaga. Ruzivo rwuri pamapeji eWikipedia runogadzirwa kana kugadziriswa nevanozvipira kutenderera pasirese.
Iri dhairekitori rondedzero haisi chete svikiro rekutumira yako webhusaiti muzvikamu uye subcategories kuitira kuti iwe ugone kuwana vangangove vatengi kune rako bhizinesi, asi iwe unogona zvakare kuwana runyorwa rwemabhizinesi uye nyanzvi dzinogona kukubatsira iwe kubudirira zvakare.
Endesa Webhusaiti Chinyorwa kuDhairekitori
Endesa webhusaiti webhusaiti muchikamu chaunoda uye chikamu chidiki chine mifananidzo, ruzivo ...
© 2020 Kodzero dzose dzakachengetedzwa,Yakavanzika Policy & Mitemo